Madaxweynaha Puntland oo Maanta hortagay Baarlamanka Puntland – SBC
Madaxweynaha Puntland oo Maanta hortagay Baarlamanka Puntland
Posted by Webmaster on Julaay 9, 2012 Comments
Madaxweynaha Dowlada Puntland Dr C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa maanta hortagay Mudane yaasha Baarlamanka Puntland ugana warbixiyay Xaaladaha guud ee Dalka iyo safaradii kala duwanaa ee uu Madaxweynugu dhowalahan ugu maqnaa dalka Dibadiisa .
Madaxweynaha Puntland ayaa ka hadlay Arimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen shirarkii Istambuul iyo Adis Ababa ee ay isugu yimaadeen qeybaha saxiixayaashii Raodmapka, Heshiiskii Puntland ay la gashay Dowlad deegaanka Soomaaliyda, ka qeyb galka Shirkii Burcad badeeda ee Imaaraadka, iyo sixiixida Sharciga xiliga asxaabta ee Doorashada Puntland.
Waxa uu sheegay Faroole in wax badan ka qabteen xaaladaha gudaha iyo dibadaba, sheegayna in Magaca Puntland uu marayo meeshii ugu wanaagsaneed, isagoona xosay in loo baahantahay sidii looga wada shaqeyn lahaa xaaladaha Amaanka baaqna u diray Ganacsatada Puntland.
Waxa ay noqoneysaa Markii ugu horeysay oo uu madaxweynaha Puntland hor yimaado Baarlamanka Puntland tan iyo intii ka dambeysay markii uu furmay kalfadhiga 27aad ee Baarlamanka Puntland.
Waxaa xusid Mudan in mudanayaasha Baarlamanka ay su’aalo weydiiyeen madaxweynaha Puntland balse markii ay socotay su’aalo weydiintaas ay saxaafada banaan joog ka aheyd.
Julaay 9, 2012 at 5:24 pm
war waxba meesha kuma hayaan been bay isu sheegayaan daaraadku
Julaay 11, 2012 at 9:33 am
war daarood layne daa rood baa maskaxda idinka galaye belayayahay buufiska qabta iska amus .. Waxan aad ledahay waa daarood waa burcad badeede.. Wax uu darod ka ogyahay majitee isagii baa laga yaban yahaye waa copy ayan filanaye nocani kama dhalanjirin reekaas aad shegaside malaha waa xagaaga abti